ကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on May 17, 2013 in Creative Writing | 57 comments
ရန်ကုန်မြို့ ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတွေမှာ သွားရလာရ ၀ယ်ရချမ်းရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပါပဲ။ ပစ္စည်း တွေလဲစုံ ဈေးတွေကလဲ စစ်စရာမလို ကြည့်ချင်တာအားလုံး ကိုင်တွယ်ကြည့်ရှု့ခွင့်ရ၊ အရောင်းစာရေးမကိုမျက်နှာချိုသွေး ဟိုဟာလေးပြပါအုံးဒီဟာလေးပြပါအုံးပြောစရာ မလိုအောင်ကိုစိတ် ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ အဲကွန်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဈေးဝယ်လို့ရသလို ဗိုက်ဆာရင်လဲစားစရာဆိုင်နဲ့ဆိုတော့ တခါတလေ ကျွန်မတို့မိသားစုဈေးမ၀ယ်တောင် သီးသန့်စားဖို့သွားလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတလေ မိုးအရမ်းရွာရင် မိုးလုံလေလုံကားပါကင်ရှိတဲ့ စင်တာတွေသွားတတ်ပါတယ်။ အဲလိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ ပြောစရာလေးတွေတွေ့ လာရပါတယ်။ စင်တာတွေမှာဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့နဲ့ တခြားသောပြသနာလေးတွေ တွေ့လာရပါတယ်။ တခါကတော့ကျွန်မ သင်တန်းတက်စရာရှိလုိ့ မြို့ထဲမှာသင်တန်းသွားတက်ပါတယ်။ သင်တန်းကတနေကုန်ဆိုတော့ ထမင်းဘူးကြီးလဲမသယ်ချင်၊ သင်တန်းခန်းထဲမှာလဲစားလို့မရ။ အဲလိုအဆင်မပြေတာနဲ့ထမင်းဘူး မယူပဲ သင်တန်းနဲ့နီးတဲ့ တောင်ဝင်စင်တာမှာ နေ့လည်စာသွားစားလိုက် ပါတယ်။ ထမင်းစားဆင်းချိန်ကတနာရီပဲဆိုတော့ သွားမှာ စားမှာ ပြန်လာမှာနဲ့ အချိန်တွက် ပြီး မြန်တာပဲစားလိုက်ပါတယ်။ စီပီကြက်ကင်ဆိုင် တို့ ဟမ်ဘာဂါဆိုင် ကြက်ကြော် တို့ အဲလို ဆိုင်တွေမှာစားပါတယ်။ အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲ ပထမစားတဲ့ဆိုင်တခုကတော့ Moon Bakery။ သူက အစားအသောက်က ကန်လမ်းလောက်မကောင်းပေမဲ့ ဆိုင်ကျယ်တာရယ် အမြန်စာရတာရယ်ဝင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာစပြီးစိတ်အနှောက် အယှက်အကြီးကြီးတွေ့ရတာပဲ။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ ဟင်းပွဲထွက်လာရင် ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းကြီးကို ဂလောင်ဂလောင်နဲ့လှုပ်တော့တာပဲ။ ဟင်းပွဲကလဲ တလစပ်ထွက်တော့ ကလောင်ကလောင်နဲ့ အဆက်မပြတ်ပါပဲ။ နားကိုပူနေတာပဲ။ တခြား သာယာနာပျော်အသံလေးတွေ တီးလုံးလေးတွေရှိပါရဲ့နဲ့ ရေခဲချောင်းရောင်း သလို ဂလိုင်ကြီးခေါက်နေတာနဲ့ နောက်နေ့တော့ တော်ဟဆိုပြီးတခြားဆိုင်တွေဘက်လှည့်ပါတယ်။ အဲလိုကနေ တနေ့တော့ ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာ ကြက်ကြော်နဲ့ အာလူးကြော်နဲ့အအေးနဲ့စားနေတုန်း စားတဲ့ ကောင်မလေးတွေဝင်လာတယ်။ ခဏနေတော့ စာပွဲထိုးက အမှိုက်ထုပ်ကြီးကို စားတဲ့သူရှေ့က မချသွားတယ်။ နောက်တော့ လက်ဆေးဖို့ပေးထားတဲ့ ဘေစင်က ရေတွေလျှံကျပြီး ဆိုင်ထဲမှာရေတွေပွသွားတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။ ခုနက၀င်လာတဲ့ကောင်မလေး တွေချော် လဲတော့မလိုဖြစ် သွားတယ်။ ပွစိကိုတက်ပြီး စားချင်စိတ်မရှိတော့တာနဲ့ ဒီတိုင်းထားပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်တဆိုင် ကကျတော့ ဆိုင်ထဲလူပြည့်နေတာကို ဆိုင်ဝမှာရပ်လိုက်တာကို အမရေ အန်တီရေ လူပြည့်နေပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် လေးယောက်ဝိုင်းမှာ တယောက်ထဲထိုင်နေတဲ့သူရှိတာကို ပေါင်းထိုင် မလားအဲလိုလေး မမေးပဲ မြင်တာကို လုံးဝမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ အဲလိုအလျှင်းသင့်သလို စားနေရင်းကနေ အဆင်မပြေနေရင်း က တရက်တော့ ထမင်းစားချင် စိတ်ပေါက်တော့ ဆိုင်တွေလိုက်ရှာ လိုက်တော့ Basement 1 မှာဖွင့်ထားတဲ့ ကိုရီးယားထမင်းဆိုင်သွားတွေ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုမေးလိုက်တော့ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲစောင့် ရမှာပါဆိုတာနဲ့ ကိုရီးယားထမင်းသုတ်တပွဲမှာစားဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ၀န်ထမ်းတွေဝန်ဆောင်မှု့တကယ်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ကိုသားနဲ့လားစား အုံးမှဆိုပြီးတောင်တွေးဖြစ်သွားသေးတယ်။ တခြားသူတွေကလဲမှာစားနေတာပေါ့။ သူတို့ကလဲဆိုင်နောက်မှာပဲ ပူပူနွေးနွေးကြော်နေတာမို့ သန့်ရှင်းလတ် ဆတ်တယ်ဆိုပြီးစောင့်နေတုန်း သတိထားလိုက်မိတာကတော့ ဆိုင်ထဲမှာ သူတို့ကြော်နေတဲ့ ဟင်းနံ့တွေ ပျံ့နေတာကိုပါ။ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် မလုပ်ထားတာတော့သေချာတယ် ဒါဟာစင်တာ တာဝန်ရှိသူတွေသိသင့်တယ် လို့တွေးနေတုန်း မှာထားတာရောက်လာတော့ စားလိုက်ပြီး မြန်မြန်ပဲပြန်ထွက် လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလမ်းလျှောက်ရင်းသတိထားမိတာက ဟင်းနံ့ပါ။ တောက်လျှောက်ကြီး အစောကဆိုင် မှာရတဲ့ဟင်းနံ့ကြီး ကပ်ပါလာတာ။ အဲဒါနဲ့ မသင်္ကာလို့ အင်္ကျီကိုနမ်းကြည့်လိုက်တော့ အောင်မယ်လေးဟင်း နံ့ကြီး။ သေချင်စော်နံသွားတာပဲ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့လဲ အချိန်ကကပ်နေပြီ။ အင်္ကျီတထည်ဝယ်ဝတ်ဖို့ကလဲ အချိန်မရှိ။ ဒါနဲ့မြေညီထပ်ကိုတက်သွားကြည့်ပြန်တော့လဲ အဆင်မပြေတာနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ သင်တန်းကိုပြန် သွားရပါတယ်။ အဲဒီနေ့တညနေလုံး ဘေးက လူတွေအားနာ၊ ကိုယ့်အနံ့ကိုယ်စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ ဘာသင်သွားမှန်းမသိပဲ အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့စိတ်ပဲရောက်နေပါတယ်။ ညနေ ၅ နာရီသင်တန်းဆင်းတော့ အိမ်ကိုအလူးအလဲပြန်ရေချိုးလိုက်မှပဲ စိတ်သက်သာရာရပြီး တော်တော်စိတ်ဓါတ် ကျသွားပါတယ်။ စင်တာ တာဝန်ခံတွေနဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ကိုယ့်ဆိုင်၊ ကိုယ်ရောင်းမဲ့အစားအသောက် ကိုကြည့်ပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် ရေပိုက်မပိတ်အောင် ၀န်ထမ်းတွေ ဆက်ဆံရေး ဒါတွေဘာမှ မကြည့်ပဲ ပိုက်ဆံရလိုမှု့တခုပဲကြည့်နေတာကိုတော့ တော်တော်လေးစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ နောက်တခါသွားစား တဲ့အခါတွေမှာတော့ အဲဒီဆိုင်တွေကိုလုံးဝရှောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဆိုပြီးအော် နေတာတွေက တကယ်ကောအဆင့်မှီရဲ့လား။ အပြင်ပန်း ပုံတူပဲကူးချထားပြီး အထဲက တကယ်ဂရုစိုက်ရမှာ တွေကို ပြစ်ထားပြီး ဆိုင်အပြင်အဆင် အပြင်ပန်းအမြင်တွေကိုတော့ တကယ့်အဆင့်မှီအောင်လုပ်ထားတာတွေ ကကောမှန်ရဲ့လားလို့ တွေးမိတာလေးပါ။ ၀န်ဆောင်မှု့ဆိုတာ အပြင်ပန်းပဲပါပြီး အတွင်းပိုင်းဝန်ဆောင်မှု့တွေကို ခိုထားတာတွေဟာ တကယ့်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဟုတ်ရဲ့လားလို့ စဥ်းစားမိလို့ဒီပိုစ့်ကလေးကိုရေး လိုက်တာပါ။
ဒီပုံအတိုင်းကတော့ ထသွား ထလာ စားနိုင်မယ့် မြို့ပြ Fast Food Chain ဈေးကွက်ကို
နိုင်ငံခြားက ၀င်မယ့် Franchise လုပ်ငန်းစုကြီးတွေက ခွဲဝေ စားသွားမယ်မြင်ပါကြောင်း
သူတို့တွေက ၀န်ဆောင်မှု အ၀၀ ကို Standard တခုထားပြီး လုပ်တာဆိုတော့…
အဲလိုလာလဲကောင်းတာပဲအေ။ ခုတော့ဘယ့်နှယ့် စင်တာကြီးနဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်မှအားမနာအေ။ တကယ်ကိုပါပဲ သင်တန်းတက်ရလို့ စာတွေပြန်လုပ်ရလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ကြားထဲ စားရတာအဆင်မပြေ။ တကယ်ပါပဲအေ။
တကယ့်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ မဟုတ်တာ သေချာကြောင်းလေး အတည်ပြုပေးသွားပါတယ် သဲနု ရေ။
ကျေးဇူးပါအရီးလတ်ရေ။ တကယ့်ကို နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသငယ်လေးတွေဘ၀ရောက်မှန်းမ သိရောက် နေရတဲ့ဘ၀ စိတ်နာစရာပါ။
ဟင်းနံတွေ ထွက်နေရင် တော်တော် စိတ်ညစ်တယ်။
ဆံပင်တွေ က အဆိုးဆုံး ပဲ။
တော်ဝင် က နောက်ပိုင်း သိပ်မသွားဖြစ်ဘူး။
သူ့ရှေ့က စိန်ဂေဟာ ကိုပဲ ၀င်ပြီး ပြန်သွားတာ များတယ်။
ဟင်းနံက ကိုယ်စားရင်သာသိပ်မသိသာတာ။ အင်္ကျီမှာစွဲနေတာကျတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲစိတ်ပျက် သူများလဲအားနာ။ တကယ်ပါပဲ။ ဒေါသထွက်လိုက်တာကို။
ဟုတ်တယ်ဗျို.တော်ဝင်စင်တာ အပေါ်ထပ်က ကန်တင်းကတော့ အတော့်ကို ဆိုးပါတယ်ဗျာ…
ကျွန်တော်လဲ စားဖူးတယ်… အကုန်တောင်မစားနိုင်ဘူး.. ညှော်နံ.တွေမခံနိုင်လွန်းလို. ပြန်ပြေးရတယ်…
ဘယ်လို အတွေးမျိုးနဲ. အဲဒီနေရာမှာ အလုံအခြုံစားသောက်တန်းဖွင့်လဲ စဉ်းစားမရဘူး…
ဒါလဲ စားတဲ့သူက စားနေတာပဲလေ……
စူပါစင်တာကြီးတွေ လို.နံမယ်တတ်ထားပြီး ဒီလိုအသေးအမွှားလေးတွေကအစ ဂရုစိုက်ရမှာမဟုတ်ပါလားဗျာ…
အေးလေဟယ်။ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုလဲ လေ၀င်လေထွက်စနစ် ညော်နံ့ထွက်တဲ့စနစ်တွေ ရှိပါလျှက်နဲ့ သုံးရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ပိုက်ဆံချွေတာတာလား။ နားမလည်တာလားမသိပါဘူးဟယ်။ ပိုက်ဆံရပြီးရော ပဲလားမသိပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တန်းထည့်မယ်ဆိုရင် စနစ်တခုတော့ရှိရမှာပေါ့။ အခုတော့ ဒီအထပ်မှာ ဖွင့်၊ ဒီလိုလေးပိုင်းပြီးဖွင့် ရော့အင့်ဆိုပြီးရောလားမသိပါဘူး။ အခုဆို နှစ်လွှာမှာဆိုင်တွေတောင်ပိတ်ကုန်ရပြီ။ B1 မှာလဲနဲနဲပဲရှိတော့တယ်။ စေတနာတွေအကျိုးပေးတာပေါ့အေ။
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ရှော့ပင်းစင်တာ
မြို့ရန်ကုန်က ထွက်လာတဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အတော်ကို တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတာဘဲဆိုပြီး ဒီမှာဖြင့် အထင်တွေကြီးပြီး ဒို့ရန်ကုန်ကဖြင့် ………… ဆိုကာကြွားနေတာ အခုတော့ ဒီပိုစ့်ဖတ်မိမှဘဲ ဘယ်လိုဆက်ပြောရမှန်းကို သိတော့ဘူးဗျာ။
ပြောချင်သလိုသာပြောပါတော့ကိုခင်ခရယ်။ တခြားစင်တာတွေတော့ အဲလောက်မဆိုးပါဘူး။ Junction Square ဆိုအဲဒီလေစနစ်ထည့်ထားတယ်။ ဘာနံ့မှမရှိဘူး။ အဲလိုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ချက် တွေကတော့သူ့ဟာနဲ့သူရှိနေတာပါပဲ။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဖို့ကတော့ တော်တော်လိုသေးတယ် လို့ထင်မိပါတယ်။
အဆင်မှီပါတယ်လေးခရယ်… ကုန်တိုက်ကြီးတွေ ရှော့ပင်းမောတွေ အဆင့်မြင့်ဈေးကြီးတွေ.. အားလုံးအားလုံး…
အဆင့်မမှီတာက……………… အင်း ပြောတော့ပါဘူး ကလေးနေရာကလေးနေတာပဲကောင်းဒယ်…
အေးပါအေ။ ကလေးကလေးလိုနေပါအေ။ အဲဒါပေသိ ကလေးချီနည်းလေးတော့ကျင့်ထားပေါ့အေ။
မောင်ရွှေတိုက်စိုး ကလေးကလေးဆိုပြီး အဲလို ပြောပြောမပြေးနဲ့လေ လူကြီးက ဆဲရခက် ဆိုရခက် ဖြစ်တယ်နော်။
TNA ရေ တစ်ခါတလေကျလည်း စင်တာတွေ အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်တဲ့အခါ ဒီဇိုင်းဆွဲပေတဲ့ ပိဿုကာအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့လည်းဆိုင်သလို၊ တစ်ချို့ ပိုင်ရှင်တွေကလည်း အရောင်းဆိုင်ခန်းနေရာကို ဌားတဲ့သူကို အမှီပြုပြီး စားသောက်ဆိုင်တန်းတို့ဘာတို့ ပြောင်းဌားလိုက်တော့ အဲလို ကြော်ထွက်ပေါက်မရှိ ဘာမရှိ ပြန်လည်းမပြင် ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်လဲပါမယ်ထင်ပါတယ်၊
တစ်ချို့ကလည်း နဲနဲကို လူမလာလာအောင် ပိုပိုသာသာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဆိုပြီး ကျော် အောင် ညာတဲ့ ကြော်ငြာတွေကလည်း ရှိသေးတာကိုးဗျ။
ကိုခင်ခရေ အဲဒီတော်ဝင်စင်တာကြီးက ရှော့ပင်းစင်တာအတွက်ဆိုပီး ရည်ရွယ်ဒီဇိုင်း ထုပ်ဆောက်ထားတာမို့ ပိုလို့အံ့သြရပါတယ်။ ဒီလိုစနစ်တွေကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစား ထားလို့ ဒီဇိုင်းထုပ်တဲ့ အာခီသမားကိုအံ့သြမိပါတယ်။
junction square က city mart မှာ လေစနစ် သိပ်မကောင်းတာ တွေ့ရတယ် … လူလဲရှင်း နေရာလဲ ကျယ်ရဲ့သားနဲ့ လေ၀င်လေထွက်မကောင်းလို့ အဲဒီအထဲရောက်ရင် ကြာကြာမနေနိုင်ပဲ အမြန်ပြန်ထွက်ရပါတယ်။
အဲဒီ စီးတီးမတ်ထဲမှာဖုန်းလိုင်းလဲမမိဘူး အမဝေရေ။ ဘယ်ရောက်ရောက်လိုင်းမိပါတယ်ဆိုတဲ့ CDMA 800 တောင်လုံးဝ မမိပါဘူး။ အပေါ်စားသောက်ဆိုင်ကတော့ တော်ဝင်စင်တာလောက်မဆိုးလို့ စားလို့နဲ နဲအဆင်ပြေပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးတပွဲအကြော်တခုနဲ့ ၁၂၀၀ ဆိုတာလေးကလွဲလို့ပေါ့။ အာဟိ
အောင်မယ်လေးအေ။ အဲဒီ တို့အီလက်ဆိုတဲ့ ဟာကလဲ သွားချင်ရင် အပြေးအလွှားအပေါ်တက် အောင်ဆင်း နဲ့ပါအေ။ ကလေးပါရင် ဒုတ်ခရောက်ချက်။
အကြံတူရင် နောက်လူသာဆိုသလို နောက်ပိုင်းစင်တာတွေက အရင်စင်တာတွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်ကို လေ့လာပြီးလုပ်လာကြတော့ နောင်တော့ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ဗျ။
စားသောက်ဆိုင်တွေကလည်း စင်တာဘက်က မလုပ်ပေးဘူးဆိုတောင် သူတို့က ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုရမှာပေါ့ ဒါမှ ကိုယ့်ဆီလာတဲ့ စားသုံးသူကို ရေရှည်ထိန်းနိုင်မယ်လေ၊ အခုလိုဆိုတော့ နောက်တစ်ခါပြန်သွားဘို့ စဉ်းစားကြမှာဘဲလေ။
နောက်တခေါက်ဆိုတာတော့ တော်တော်လေးကိုမေ့မှပဲသွားဖြစ်တော့မှာ။ တကယ့်ကို တခါစားတွေပါ ပဲ။ နောက်တခါသွားကိုမစားချင်တော့တာပါ။
အစ်မသဲရေ .. သများ အံဆုံးပေါက်တုန်းကပေါ့ …. ။ အိမ်မှာ အောင်းနေလျှင် အိမ်နီးနားချင်း အညှော်နဲ့ တိုးမှာ စိုးလို့ .. ရှော့ပင်းစင်တာ ပတ်မှဗြဲ … သများပါးရီးတခြမ်းဖုသွားတယ် … မှတ်မှတ်ရရဗြဲ … ။
ရှောပင်းစင်တာတွေမှာ စားသောက်တန်းထားမယ်ဆို ..စည်းလေး စနစ်လေးနဲ့… အဆင်ပြေအောင် လုပ်သင့်ပါတယ် … ။ မဟုတ်ရင် အားရီးစိတ်နှောက်ယှက် ဖစ်ရဒယ်ကွီ… :eee:
ဟုတ်ပါ့အေ။ တကယ်ကိုပါပဲ အဲဒီစင်တာတွေမှာရောင်းနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေလဲ အနည်းနဲ့အများတော့ အနံ့ကူးမှာပဲထင်တယ်နော်။ တာဝန်ရှိသူတွေ သိသင့်တယ်။ ဆိုင်တွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကို။ ပါးတခြမ်း ဖုတာလျှော်ကြေးမှမတောင်းခဲ့။ နိုင်ဂျံဂါးမှာဆို တရားစွဲလျှော်ကြေးတောင်းပီးပီ။ နိုင်ဂံတဂါ အဆင့်မှီ ဆိုဒေါ့ လျှော်ကြေးတောင်းခဲ့ရမှာ။
aungpu michaelaungpu says:
ကိုယ်က စင်တာထက် အဆင့်မြင့်နေတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်
ကိုယ်က စင်တာထက် အဆင့်မြင့်နေတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြံကြံဖန်ဖန် ဂုဏ်ယူလိုက်ဇမ်းဘါ ကျောင်းအမဂျီးတို့ရယ်
ဘွပုဒို့ပြောမှပဲ ကိုယ်ဒွေ ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်အဲလောက်မြင့်မှန်းတိဒေါ့ဒယ်။ ကျေးဇူး။
ချာပု ပေါဒါ အဟုတ်ဆုံးဘဲ ….
ယောနိသော မနသိကာရ လို့ဒေါင်မှ ချိဒေးဒယ် …
ဟို နိုင်ငံဒဂါ အဆင့်မှီဒါ မမှီဒါ သွားအော်နေနဲ့ …
ဂလောက်ဘဲ ပေါဒတ်ဒယ် တိုရီးသဲ ရယ် .. ဟယ် .. ဟယ် ..
အေးပါဘုရားဒဂါရယ်။ ကျုပ်နောက်အောတော့ဝူးရယ်။ ကျုပ်က ရင်ထဲကခံစားရတာကို ရင်ဖွင့်တာပါအေရယ်။ ကျုပ်ပေါဒါလဲတူဒို့တိမယ်မထင်ဘူး။ ကျုပ်ဟာကျုပ်ရင်ထဲက ဒေါသ ကိုရွာထဲမှာပြောဒါရယ်။ သမဒဂျီးနဲ့ အမေစုတောင်မပြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကျုပ်တို့ ဘယ်ပြင် နိုင်ပါ့မလဲနော့။ အဲတော့လဲ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်နဲ့လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုပဲဆုံးမရင်း ကိုယ့်ကိုတိုင်ပဲပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အေ။
ရွှေကြည်တော့ အဲဒါတွေသိပ်မသိဘူးရယ် အပြင်သွားလူရှုပ်တာနဲ့မသွားဖြစ်တာရော နောက် အဲလိုနေရာတွေကရွှေကြည်တို့လို လခလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက်က အလှမ်းမမှီဘူးလေ အဲဒိတော့ ဗန်တီလေးရှင်းကောင်းတဲ့ အကာအရံမဲ့တဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေပဲစားတာများတယ် :hee:
ပြောချင်တာကတော့ သူထေးတွေ အာခီပညာရှင်တွေတော်တော်များများ နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံရှိကြပါတယ်
အဲ့တော့ သိသိရဲ့နဲ့အချောင်ခိုချင်တဲ့ အလွယ်လိုက်ချင်တဲ့ မြန်မာဗီဇကြောင့်လို့ပဲ ထင်မိတယ်
အဲ သူကြီးကတော့လာတော့မယ် စနစ်ကြောင့်မဟုတ် ဆိုပြီးတော့
“အဲ့တော့ သိသိရဲ့နဲ့အချောင်ခိုချင်တဲ့ အလွယ်လိုက်ချင်တဲ့ မြန်မာဗီဇကြောင့်လို့ပဲ ထင်မိတယ်
အဲ သူကြီးကတော့လာတော့မယ် စနစ်ကြောင့်မဟုတ် ဆိုပြီးတော့”
အမှန်အကန်ပါပဲ ရွှေကြည်လေးရေ။ တကယ့်ကို ခိုထားတာပါ။ သူများတွေဆို အိမ်တွေမှာတောင်သုံးထား ကြသေးတာပဲ။ မောကြီးတခုလုံးလုပ်နေပြီး မသုံးဘူးဆိုတော့ မြန်မာပီပီပေါ့လေ။
အင်း စနစ်ကြောင့်မဟုတ် စနစ်ကြောင့်မဟုတ်
ကျုပ်ကတော့ မရောက်ဖူးလို့ဘာမှ မပြောနိုင်ပေမယ့်
မေးလ်လေးနဲ့ပို့ ပေးစေချင်ပါတယ်
တစ်ကယ်လို့ များ ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့ရင် ၊ သွားမစားဖြစ်အောင်ရယ်ပါ
အောင်မယ်လေးအေ ပြည်လမ်းပေါ်မှာ ပြူးပြူးကြီးရယ်။ တော်ဝင်စင်တာဆိုတာများ လူသိရှင်ကြား။ အဲဒီမှာ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင် B1 မှာဖွင့်ထားတာ။ ကျုပ်နာမည်တော့ဖတ်ခဲ့ပေမဲ့မေ့သွားပြီ။ သူတဆိုင်ပဲရှိတယ်။ ကိုရီးယားစာတွေချည်းရောင်းတာ။ နောက်ကြက်ကြော်ဆိုင်။ သူကညစ်ပါတ်တယ်အေ။ မွန်းဘေကရီကတော့ နားညီးတယ်။ ညီးလာရင်ထပ်ပြောမယ်အေ။
အယ်ကယ်ဂျီးရေ လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းက ရှမ်းပုံစားဆိုတန်မှတန်။ အသားနဲ့ အရွက်နှစ်မျိုးမှ ၁၀၀၀ ရယ်။ သတ်သတ်လွတ်ဆို အရွက် သုံးမျိုးပါတယ် ၆၀၀ ရယ်။ အခုဟာကလဲ သင်တန်းနဲ့နီးတာရယ်။ ထမင်းဗူးမယူချင်တာရယ်။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးထား တဲ့ကြားထဲက အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ထားလို့ သင်တန်းနားမှာရှိတဲ့ အသုတ်တွေကလဲ စားလို့မရတာရယ် တွေကြောင့်သွားစားဖြစ်တာပါ။ တကယ်ပါ အဲဒီရှမ်းပုံစားလောက်တောင်စားမကောင်းတာအမှန်ပါ။ ၀န်ဆောင်မှု့ကလဲကွာသေး။
” လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းက ရှမ်းပုံစားဆိုတန်မှတန် ”
သွားစားကြည့်ဦးမှပဲ ။ ဟိ ဟိ ။
စားကြည့်အဘဖော တကယ်ကောင်းတယ်။ ဘယ်အချိန်စားစားလက်ရာကပြောင်းဘူး။ ကျွန်မတို့ဆို သူ့ဆီစားတဲ့နှစ်နဲမှမနဲတော့ပဲ။ ယနေ့ထိစေတနာပါနေဆဲ။
အဲ့ဒါတွေကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား အဲ့ဒါ အခွင့်ကောင်းဗျ…………..
အဲ့လို အသုံးမကျတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမပြည့်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ဆိုင်တွေရှိတာ
ယူတတ်ရင် အခွင့်အရေးပဲ အဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ သူတို့ထက်သာအောင် ပိုကောင်းအောင်
မိမိကသာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက် လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိမယ် ဆိုရင် ထိုးဖောက်ရတာ
သူတို့ကို အပစ်တင်ရမှာပဲ။ သူတို့မကောင်းတိုင်း အပစ်မတင်ပဲ မကောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေနားအားလုံးကိုယ် လိုက်ဖွင့်နေရမယ်ဆိုတာတော့ အင်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားပါအုံး။
နောက်ဆိုင်တခုဖွင့်ဖို့ အဲဒါလွယ်ဒယ်များမှတ်လို့ တထေးဒွေပဲလုပ်နိုင်တာ။ နဲတဲ့အရင်းအနှီးမှမဟုတ်တာ။ ဆိုင်ခန်းခက သိပ်မရှိလှပေမဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်ဘာညာသာရကာနဲ့တင်ပဲကို လွယ်တာမဟုတ်။ နောက် တခု ကလုပ်နိုင်တဲ့သူရှာရသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်နိုင်မှ။ ဆိုင်ကိုစီးပွားရေးတခုအနေနဲ့လုပ်နိုင် အုံးမှ။ မကြီးကြပ်နိုင်လို့ကတော့ အခုဆိုင်တွေနဲ့ ထူးမ ခြားနားဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။ အဲတော့ စားသုံးသူတွေဟာ ၀န်ဆောင်မှု့ကောင်းဖို့တောင်းဆိုသင့်သလား။ ဒါမှမဟုတ်စားသုံးသူတွေက သူတို့စားလို့အဆင်မပြေတိုင်း ဆိုင်ဖွင့်တာက ပိုမှန်တာလားဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူး) ရေ ပေးထားတဲ့အကြံက ဆင်ကြီးကိုပုလင်းထဲထည့်ခိုင်း သလိုများဖြစ်နေသလားလို့။
စင်တာတွေသွားရင် တစ်ခါမှ အစားမစားဖြစ်ဘူး။
အဲဒီ စားသောက်စရာတွေက ဈေးကြီးတယ်ထင်ပြီး နှမျောတွန့်တိုစိတ်က ကြီးစိုးနေလို့။ :harr:
ဈေးကြီးပေမဲ့လဲ သန့်ရှင်းတယ်လို့ယူဆပြီး သွားစားမိတာပါအန်တီမမရယ်။ အခုတော့ တကယ့်ကို ညံ့ဖျင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့တွေပဲရခဲ့ပါတယ်။ တခါ ၃၅ လမ်းကြေးအိုးသွားစားတာ ကြေးအိုးလဲ မွှေလိုက်ရေ အောက်ထဲ ကနေ သူတို့စားပီးသား နေကြာစေ့ခွံတွေထွက်လာလို့ နောက်သွားမစားဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီလိုဆိုင်တွေ မှာဝန်ဆောင်မှု့ကို မျှော်လင့်လို့မရတာသိတာမို့ အထွေထူးမပြောလိုပေမဲ့ အခုလို စင်တာကဆိုင်ကြီးတွေ မှာတော့ဝန်ဆောင်မှု့ကိုမျှော်လင့်မိတာအမှန်ပါပဲ။
အခုတောင် TNA တို့မသွားတော့ဘူးမဟုတ်လား…
ဟုတ်တယ် ဦးကြီးမိုက်ရေ အခုဆို အဲဒီစင်တာ ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေဆို တော်တော်များများ ပိတ်လိုက် ကြရသလို B1 ကဆိုင်တွေလဲ ဖွင့်စကထက်တ၀က်လောက်နဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ စားတာအဆင် မပြေ တော့လဲနောက်မလာတော့မကိုက်တော့ဘူးပေါ့ ဦးကြီးမိုက်ရယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ISO လက်မှတ်က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်လာတယ်။ ဆိုင်ကွာလတီကို ဆိုင်ရှင်ထိန်းတာထက် ISO ကထိန်းတာပိုထိရောက် တယ်ဆိုတာ ဒီဆိုင်တွေသဘောမပေါက်သေးသလို ၀န်ဆောင်မှု့ အဆင့်အတန်းတခု စံတခုသတ်မှတ် ထားရမယ်ဆိုတာလဲ သဘောမပေါက်ကြသေးဘူး။ ဟိုတခါ လဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ညားခါစ သူဋ္ဌေး သားလင်မယားလေး မိဘတွေက စားသောက် ဆိုင်ထောင်ပေး လိုက်တာ သူတို့ အုပ်ချုပ်မှု့နားမလည် စီမံခန့်ခွဲမှု့ညံ့ဖျင်းတာနဲ့ ၆ လလောက်ပဲခံတယ် ပိတ်လိုက်ရရော။ သူတို့က မနက် ရောက်လာ။ ၀န်ထမ်းတွေကို နာရီဝက်လောက်ညွှန်ကြားပြီးတော့ပြန်။ ဒါလောက်နဲ့ရ မယ်ထင်တာ။ တကယ်တော့ မရဘူးဆိုတာ သူတို့နောက်မှသိသွားတယ်။
TNA အပြော အရ ဆိုရင်တော့ ဆိုင်တွေကလူစည်ကား လျှက်ဘဲ လေ .. ဟုတ်တယ်ဟုတ် ..
အများစု က ပြဿနာ ကို ပြဿနာ မှန်း မသိကြသေးဘူး .. အဲ့ဒါကပြဿနာ ..
အဲ့ဒီတော့ ခိုလိုရတဲ့သူများက ခိုလျှက်ဘဲလေ … ဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့
နိုင်ငံတကာကြီးကတော့ .. ..စာရေးလိုက်ရင် ဖြစ်သွားတာဘဲ ..
အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်း ..
အင်းဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးကထူးဆန်းရယ်။ လူတွေကတော အသစ်အဆန်းဆို မြီးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့သဘာဝအရတော့ စားကြ သွားကြအုံးမှာပဲပေါ့။ နောက်တော့လဲ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးရွေးချယ်သွားကြမှာပေါ့။ သူတို့ကတော့ ပုံမှန်ဖောက်သည်ထက် လူစည်နေတာ ကိုပဲ အောင်မြင်တယ်ပြောမှာပေါ့။ ဒါကလဲ စင်တာတွေမှာဖွင့်တဲ့ဆိုင်နဲ့ အပြင်မှာ ပုံသေနေရာယူဖွင့် တဲ့နေရာရဲ့ ခံယူချက်ကွာခြားမှု့ပဲထင်ပါတယ်။ စင်တာကဆိုင်တွေ ကတော့ ဈေးလာဝယ် တဲ့ သူတွေစားမှာပဲ ပုံမှန်ဖောက်သည်မလိုဘူးလို့တွေးပြီး ၀န်ဆောင်မှု့လျှော့လိုက်မယ်လို့တွေးကောင်း လဲတွေးနိုင် ပါတယ်။ အပြင်ဆိုင်တွေကျတော့ ပုံမှန်ဖောက်သည်လိုတော့ ၀န်ဆောင်မှု့ဦးစားပေး တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကထူးဆန်းပြောသ လို နိုင်ငံတာကအဆင့်မှီကတော့ စာကပ်လိုက်ရတာပဲနော့။ မှီမမှီဆို တာကတော့ နောက်ပိုင်းအဆုံးအဖြတ်ပေါ့လေ။
ဆီဒိုးနားရောက်မှ ဇွန်းတွေက်ိုရွံရှာတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့
လမ်းဘေးမုန့်ဟင်းခါးစားတဲ့သူက ဆီဒိုးနားကဇွန်းကိုတော့ဖြင့် ရွံမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုပြောနေတာကလဲ လမ်းဘေးဆိုင်ဆိုရင် ၀န်ဆောင်မှု့သန့်ရှင်းမှု့ဒါတွေပြောမနေပါဘူး။ ဒါတွေမရလဲနားလည်ပေးရမှာပေါ့။ လမ်းဘေးဆိုင်ကိုး။ အခုပြောနေတာက နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဆိုတဲ့စင်တာကြီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဝန်ဆောင် မှု့ကလေးကိုထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်လို ဇွန်းကိုး တစ်ရှူးနဲ့မသုပ်တဲ့သူကို အဆင့်မရှိလေခြင်းဆို့ပီး
ဟုတ်ပါတယ် ကျုပ်ကလည်း အဆင့်မှမရှိပဲ
ကျွန်မကတော့ဖြင့်တခါမှမသုတ်ဖူးသလို အဲလိုသုတ်တဲ့သူမျိုးလဲမတွေ့ဖူးလို့ မသိပါကြောင်း ခရီးသည်ကြီးရေ။
အဲဒါ တော်ဝင်စင်တာ မို့ပါ။
နေရာတစ်လက်မမကျန် ပိုက်ဆံရဖို့ပဲ ဦးစာပေးစီစဉ်ထားလို့
အဆောက်အအုံကြီးသလောက် အထဲမှာ ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီး သွားလို့မကောင်း ပတ်လို့မကောင်း ၀ယ်လို့မကောင်း ဖြစ်နေတာပါ။
အဲ… စားလို့လဲ မကောင်း … ပေါ့လေ။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးဦးပါလေရာရေ။ ဂျန်းရှင်းတွေအားလုံးစနစ်တွေကောင်းကြပါတယ်။ အတုယူသင့်ပါ တယ်။ စေတနာလေးပဲလိုတာပါ။
နိုင်ငံတကာတော့ ဖတ်စဖု နေနေ ….
စားသောက်ဆိုင်ပဲ ပြောပြော ….
ဟိုတယ် မီးဖိုချောင် ပဲ ပြပြ …
ကတ်စတမ်မာနဲ့ ဆက်ဆံခြင်း ..
သန့်ရှင်း သိမ်းဆည်းခြင်း စတာတွေမှာ SOP လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Standard Operating Procedures တွေ ရှိတာပဲ။
ကိုယ့် ဆိုင် က ဘယ်လို အဆင့်အထိမှီပါတယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးရင် သူ့ရဲ့ SOP အဆင့်မှီအောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။.
အဲဒီ အတွက်လည်း လိုက်စစ်ဆေးတဲ့ ဌာနမျိုးရှိပါ၏။
အဲတော့ တကယ် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီချင်ရင်တော့ အစကနေ အခြေကနေ ဖြုတ်၊ ထုတ်၊ သတ် (အဲလေ) ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲ၊ ပြင်ဆင်ရမယ် ထင်ပါရဲ့ လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ခက်တာကတော့ခက်တာပဲ။ ဒါတွေပြောနေရင်လဲနိုင်ငံရေးတွေပါကုန်တော့မယ်။ FDA ဘာလုပ်နေလဲကစ သိနေတော့လဲ ဒါတွေပြောမနေချင်တော့ပါဘူးအေ။ ဒီမှာကတော့ ပေးကမ်းခြင်းသည်အောင်နိုင်ရာ၏ ဆိုတာက ရှိနေမြဲ ရှိနေဆဲမို့ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ခြောက်ညက်နှာ အထုတလော ပျော်ဘူးရယ် အူးကြောင်ရေ့။
မမသဲနုအေးက တော်ဝင်စင်တာသွားစားပြီး အဲ့လိုဖြစ်လာတာကိုး
ပေးကလန်တို့ကတော့ လမ်းဘေးထမင်းဆိုင်စားတာတောင် တော်ဝင်စင်တာကဆိုင်တွေထက် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းနေသလားလို့
ရုံးက ပန်းဆိုးတန်းမှာဆိုတော့ ရူဘီမတ်နဲ့နီးပါတယ်
အဲ့မှာစားရတာ စောင့်ရတာနဲ့အချိန်မမှီပါဘူး :eee:
ဒီလိုနဲ့ ဈေးလည်းသက်သာ အချိန်ကုန်လည်းသက်သာ ၀န်ဆောင်မှုလည်းအပြည့်ရတဲ့ လမ်းဘေးကထမင်းဆိုင်မှာပဲ တုတ်ပါတော့တယ် :harr:
နီးတာကလဲအဲမှာ ဆိုတော့ ခါတိုင်းစားတာမဆိုးဘူးဆိုပီးသွားမိတာရယ်ပါ။ မသွားတာကြာတော့ အဲလို ဆိုးနေမှန်းမသိလိုက်တာလဲပါသပေါ့လေ။ နောက်များတော့ မစားတော့ပါဘူး။
ပိုင်ရှင်ကတော့ ငါ့ဟာငါ့ဟာ ဆိုပြီး သွေးနားထင် ရောက်နေမှာပဲ၊ စားမယ့်သူ မရှိလို့ ပိတ်ရရင်တောင် မြန်မာတွေ နဲ့ မတန်လို့ ဆိုပြီး တလွဲ ကောက်ချက်ဆွဲ မှာ သေချာသလောက်ပဲ။ မန်းလေးမှာ ကုံးထက် ကြက်ဆီထမင်းဆိုင် ရှိပါရောလား၊ ဆိုင်က အောင်မြင်လာတော့ မာန်တွေတက် ၊ စားပွဲလဲမရှင်း၊ အောက်မှာ တစ်ရှုးတွေ ပွလို့ ၊ ဒီကြားထဲ ကောင်တာက ဘွားတော်က ဆိုးလိုက်တာ သူ့လုပ်စာ နဲ့အလကားလာစားသလိုပဲ ၊ အဲကတည်းက လုံးဝသွားမစားတော့ဘူး၊ လေးငါးနှစ်ရှိပြီ အေးရော၊ ပြင်စရာတွေက အများကြီးပါ၊ အဆင့်ခွဲချင်တတ် ကြတာ အဆိုးဆုံးထင်ပါ့၊
အဲလိုဖြစ်နေတော့ အောင်မြင်မှု့မရတော့သူတို့ပဲနစ်နာတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေလဲ ငွေဖြူလုပ်ချင်တာမျိုး ဆိုတော့လဲ ဒုန့်ကဲပေါ့လေ။